Xaflad lagu furayay la dagalanka cudurka Dabeysha oo Bosaso lagu qabtay+Sawiro – SBC
Xaflad lagu furayay la dagalanka cudurka Dabeysha oo Bosaso lagu qabtay+Sawiro
Munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana lagu furayay Ololaha Ciribtirka cudurka Dabeysha ama Booliyada ayaa maanta ka qabsoontay gudaha magaaladan Boosaaso xarunta gobolka Bari.
Masuuliyiin ka socotay Hay’adaha ka shaqeeya caafimaadka, masuuliyinta Wasaarada Caafimaadka Puntland ee gobolka iyo bulshaweynta kale ayaa ka qeyb galay kulankan hadalo qiimo badanna ka soo jeediyay.
Faarax Cusmaan oo ka socday Hay’ada WHO ayaa halkaasi ku faah faahiyay ujeedka xafladan isagoona u mahad celiyay dhamaan masuuliyiintii ka soo qeyb galay .
Waxa uu sheegay Mr Faarax in Barnaamijkan ay si wada jir ah u fulinayaan Hay’adaha Unicef, WHO iyo Wasaarada Caafimaadka ayna ujeedadiisu tahay sidii loola dagaalami laha cudurkan Booliyada.
Madaxda WHO ee u qaabilsan la dagaalanka cudurkan ee Puntland ayaa Axmed Mcalin ayaanle ayaa isna halkaasi ka jeediyay hadal isagoona sheegay in cudurkan markale laga helay gudaha Dalka, kiisas 2 ahna la xaqiijiyay in muqdisho laga helay ayna iminka muhiimada siinayaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen cudurkan.
Siciid Maxamed Waraabe isuduwaha wasaarada Caafimaadka gobolka Bari ayaa sheegay in dagaal xoogleh ay la galayaan cudurkan ayna ka go’an tahay in ilma kasta oo ku nool gobolka kana yar 5sano la gaarsiindoono dawada ka hortaga cudurkan, loogana baahan yahay waalidiinta caruurtaas yar yar iyo dadka waxgalka ahba in ay ka caawiyaan kooxaha ka shaqeynaya talaalkan.